သဂျီးကယ်ပါ .ကယ်ပါသဂျီး.များတို့ဖာသာ ကိလေသာထတာကို လိုက်ပြောနေဂျဒယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သဂျီးကယ်ပါ .ကယ်ပါသဂျီး.များတို့ဖာသာ ကိလေသာထတာကို လိုက်ပြောနေဂျဒယ်
သဂျီးကယ်ပါ .ကယ်ပါသဂျီး.များတို့ဖာသာ ကိလေသာထတာကို လိုက်ပြောနေဂျဒယ်
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Jun 9, 2011 in Copy/Paste, Gay/Lesbian | 8 comments
Reach and Teach – The Peace and Social Justice Learning Company offersabeautifully illustrated children’s book We Are All Born Free – The Universal Declaration of Human Rights in Pictures. Proceeds from book sales are donated to Amnesty International
ဗျို့သဂျီး အဲ့သည် အချက်30 ထဲမှာ
လိင်တူတာဘဲဖြစ်ဖြစ် မတူတာဘဲဖြစ်ဖြစ် တဏှာဘဲလို့ဟောတာဘဲ
ဘယ်လိင်ဆက်ဆံမှု့က အမှန်လဲဗျ အားကိုးပါတယ်ခင်ဗျား
Clinton: ‘Gay rights are human rights’ | Madam Secretary
Jun 22, 2010 … “Human rights are gay rights and gay rights are human rights,” Secretary Clinton declared today ataState Department event celebrating LGBT …
By highlighting instances of abuse against lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) individuals, Amnesty’s activists work to protect the basic dignity of LGBT people.
ဗုဒ္ဓုဟောတဲ့ တဏှာက.. ဖိုမလိင်ဆက်ဆံတဲ့ တဏှာမဟုတ်ပါဘူး..။
တဏှာဆိုတာ လိုချင်တာ နှစ်သက်တာ။
– ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ်၌ ခုံမင်နှစ်သက်တာကို ကာမတဏှာ၊
– ကိုယ့်ဘ၀လေး ကိုယ်တွယ်တာနှစ်သက်တာကို ဘ၀တဏှာ၊
– ဉာဏ်မပါဘဲနှင့် ဘယ်ဘ၀မှ အလိုမရှိတာကို ၀ိဘ၀တဏှာ။
(ကာမတဏှာနှင့် ဘ၀တဏှာတို့ရဲ့ ထူးခြားမှုကတော့ – ဗဟိဒ္ဓအာရုံတို့၌ နှစ်သက်မှုကို ကာမတဏှာ၊ – အဇ္ဈတ္တခန္ဓာ၌ နှစ်သက်မှုကို ဘ၀တဏှာ)
သဂျီးကို ဘယ်နှယ် မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ခေါင်းစဉ်တပ် ပြောနေရတာလဲ၊ မှတ်ထား သဂျီးက ဘောစိကြီး…
For any kinds of manner, we noted or observed or acknowledged that it is not suitable
for society , should be counted asaright ? It should be judged according to the desire of
numbers of people, just I think.
ခင်ဗျား “…” ဟုတ်လဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ ..
gay မျက်နှာဖုံးကြီးစွပ်ပြီး လျှောက် လျှောက်ပြောမနေပါနဲ့
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျားကို အရင်ပုံစံအတိုင်းပဲကြိုက်တယ် ။
ကိုရင်ပုက. လူတွေရဲ့.. မသိစိတ်လှည့်စားမှုတခုကို.. ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်တယ်..။
သူတို့ကြိုက်တာ ရွေးချယ်တာဟာ ဘာမှမမှားပါဘူး။
အဲဒါကို မကောင်းဘူးလို့ မပြောသင့်ပါဘူး။
့အံသြလို.ပါ ပု(စ်) ရယ်…….ခင်ဗျားအရင်ကတင်တဲ့ပို(စ်)တွေဟာအင်မတန် တန်ဖိုးရှိပ………….
အခုမှဗျာ လုံးဝမထင်ဝူး Bro ကို အားလုံးက၀ိုင်းပြောနေကြလို.ပိုရွဲ.နေတယ်လို.ပဲထင်တယ်..
ဆရာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ… ကိုပုအင်မတန်ပညာတတ်ပြီးတော်ကီကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ
နိုင်ငံတကာ ဘာညာ ဘာညာတွေက.. ဒါအမှန်ပဲလို့ဆိုရင်.. လိုက်မှန်မယ်..
အဲဒါကို အကိုးအကားပြုပြီး.. ဟိုလူ့ချပြ.. ဒီလူ့ချပြလုပ်မယ်..
ပြောပြန်ရင်လည်း.. မင်းက ဘယ်လောက်တတ်လို့ သိလို့လဲ..
သူတို့ကမှ ပညာရှင်တွေက ဆိုတာ ပါလာမယ်..
Madam Secretary ပြောရင်ယုံမှာပဲ.. ဟုတ်တာပဲ..
Mr. President ပြောရင် ပိုဟုတ်တာပေါ့..
လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ကြီးကပြောတော့ ပိုတောင်မှန်သေး..
ပုံလာလာပြောတိုင်းယုံနေတဲ့သူတွေ.. လို့.. မပြောပါဘူး..
ကောင်းမှု ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း.. မကောင်းမှု ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း..
မဖြစ်သင့်တာ..မဖြစ်ရအောင်.. မတွေးသင့်တာ မတွေးရအောင်..မကြံစည်သင့်တာ မကြံစည်မိအောင်..
ပြီးတော့.. သူများပြောတိုင်း မယုံတတ်အောင်လည်း ပါမယ်…
ပြောတိုင်းလည်း မယုံနဲ့.. ကြုံတိုင်းလည်းမပြောနဲ့…..